Imbali yeWebhu kunye noHlalutyo loLuntu | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 21, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Siyayithanda i-infographics… kwaye ukuba awuqaphelanga, ngoku sinecandelo le- infografikhi (kunye neyayo ifidi). Siyayithanda i-infographics kangangokuba siye saqala ukuyiphucula eyethu kunye nenxalenye yamaqabane ethu kunye nabathengi. Le yenzelwe umxhasi wethu, Indawo yeWebhu, kwaye inikezela ngembali yemidiya yoluntu kubahlalutyi kunye nohlalutyo lwewebhu.
Ukuba ungathanda ukwabelana nge-infographic kwindawo yakho, unemvume epheleleyo okoko unikezela ngekhonkco ubuyela kule post kunye Indawo yeWebhu. Le infographic yaphuhliswa yiarhente yethu, Highbridge.
Juni 22, 2011 ngo-12: 22 PM
Juni 22, 2011 ngo-3: 04 PM
Ubambe kakuhle, Marco! Ilogo yeNetscape ezayo 🙂
Juni 24, 2011 ngo-9: 51 PM
Ngaba ungadwelisa imithombo yakho? Oko kufuneka kube yinto eqhelekileyo xa usenza i-infographic.
Jun 25, 2011 ngo-2:11 AM
Oko kuqhelekileyo kwi-infographics enikezela ngezibalo. Nangona kunjalo, oku akuvotelwanga okanye idatha ibalwe efuna ukuqinisekiswa. Uluhlu lwezibonelelo beziya kuba lude kune-Infographic ngokwayo. Ukuba ufunda into nganye, uya kufumanisa ukuba sibhekisa kumthombo apho kuyimfuneko (iWikipedia, Gartner, igama leNkampani, njl.). Jonga iimbali zewebhusayithi zenkampani ngokunjalo.
Aug 1, 2011 ngo-8:53 PM
Ulungiso nje oluncinci nje FYI, XiTi (ngoku AT Internet) yaqala ngo-1997, hayi ngo-2004.
Aug 1, 2011 ngo-9:03 PM
Ingqwalasela ibingekho ekusungulweni kwenkampani kodwa kwiqonga lohlalutyo elakhutshwayo.